हलिउड/बलिउड « Lokpath
२०७५, २४ पुष मंगलवार ०४:३५
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष पदका लागि मल्ल र भट्टको मनोनयन
भीमदत्तनगर । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदका लागि यहाँका दुई व्यवसायीले सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका छन् । सङ्घको १६औँ कार्यकारणी समितिको निर्वाचनका लागि लागि वर्तमान कार्यसमितका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जङ्गबहादुर
‘गोल्डेन ग्लोब्स’ अर्वाड २०१९: तस्वीरमा ‘रेड कार्पेट’
एजेन्सी । सन् २०१९ को पहिलो गोल्डेन ग्लोब्स अर्वाडमा समारोह आइतवार सम्पन्न भएको छ । हलिउडका अधिकांश चलचित्र र टिभीका कलाकारहरु लस एन्जलसमा भएको ७६ औं गोल्डेन ग्लोब्स अर्वाडमा सहभागीता रहेको थियो
अलबिदा कादर खान : काबुलबाट शुरु भएको जिन्दगी क्यानडामा अन्त्य
एजेन्सी । कुशल अभिनेताका रुपमा ख्याती कमाएका कादर खानको निधनले बलिउड सिनेमा नगरी नै शोखमा डुबेको छ । उपचारको क्रममा उनको क्यानडामा निधन भएको थियो । कलाकारितासँगै पटकथा समेत लख्ने
चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा विवाह बन्धनमा बाँधिदै
एजेन्सी । चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा आज आफ्नी प्रेमिका गिन्नी चतरथसँग विवाह बन्धनमा बाँधिदैछन् । उनको वैवाहिक कार्यक्रम कबाना रिपोर्टमा तय गरिएको छ । भारतीय अनलाइन दैनिक भास्करका अनुसार विहेको
फोटोमा हेर्नुहोस् प्रियंका र निकको बिहे, म्यागजिनमार्फत सार्वजनिक
मुम्बई । अमेरिकी गायक निक जोनससँग बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको अमेरिकी डिसेम्बर १ र २ मा दुई संस्कारअनुसार विहे भयो । उनीहरुको हिन्दु र इशाई सस्कार अनुसार विहे भएको हो
हिन्दी भर्सनमा २.० ले अहिलेसम्म कति कमायो ?
एजेन्सी रजनीकान्त र अक्षय कुमार अभिनित फिल्म २.० को हिन्दी भर्सनले पहिलो ओपनिङ विकेन्डमा ९५ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाई गरेको छ । फिल्म गत विहीबार रिलिज भएको थियो । पहिलो
कति खर्च गर्दैछिन् बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आफ्नो विवाहमा ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफ्ना विदेशी प्रेमी निक जोनससँग लगनगाँठो कस्ने मिति नजिकिँदो छ । भारतीय मिडियाहरुका ३ डिसेम्बरमा यी दुईबीच बिहे हुने छ । हलिउड गायक तथा
दीपिकालाई रणवीरले लगाइदिए ३ करोडको औंठी
मुम्बई– रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण इटालीमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिइसकेका छन् । उनीहरुको काेँकणी र सिन्धी परम्पराअनुसार विवाह भएको हो । विहेपछि रणवीरकी पत्नी अर्थात दीपिका पादुकोणको थप फोटो सार्वजनिक
सकियो प्रतिक्षाको घडी, सार्वजनिक भयो दीपिका र रणवीरको विहेको तस्बिर
काठमाडौं– रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणबीचको विहेको २ तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सार्वजनिक भएको एउटा तस्बिर बुधबार कोँकणी संस्कार अनुसार भएको विहेको क्रमको हो ।तस्बिरमा रणवीर
दिपिका–रणवीरको विवाहको तस्वीर किन गरियो डिलिट ?
यतिबेला दिपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको नाम ट्वीटरमा ट्रेन्डिङमा छ भने सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुका निमित्त ‘शुभकामना’को ओइरो लागेको छ । बलिउडका केही लोकप्रिय ‘स्टार कपल’ को सूचीमा पर्ने यी जोडी
इतिहासमा आज : एयर इण्डियाको ‘बोइङ-७०७’ विमान दुर्घटना हुँदा ११७…
कर्णालीलाई कोरोनाविरुद्ध ११ हजार खोप
म्यानचेस्टर सिटी एफए कपको पाँचौं चरणमा